rindran-teny an-kabary - Instant Malagasy
Haingon-kabary maro samihafa no hozaraiko aminao eto. "Ny voasary mantsy no hanitry ny ala, ny tongolo no hanitry ny saha, ny havozo manitra an-tanety, fa ny haingon-teny kosa no hanitry ny kabary"
Mahavariana ny mihanoka ny kabarin'ireo famantsilahy amin'ny fandaharan-teny. Toa mipetrapetraka èry ny ohabolana, ny hainteny, ny tononkalo hany ka maharevo sy mahasondriana ny mpihaino. Tsy mahagaga loatra izany satria zava-kanto ny kabary ary izay voambolana na tohan-kevitra nampiasaina ao dia nokendrena ho kanto fatratra.
Nahoana moa raha mba hitady ihany koa ianao karazana zavatra kanto ahafahana manaingo ny kabarinao. Vitsivitsy ireto hozaraiko aminao ireto, ampiasao araka ny habaka sy ny fotoana hikabariana.
Haingon-kabary fantina 1
Par Parfait Partout le 25 Novembre 2013 à 12:07
“Ny tambolombolo tadio, hono, mahaditsoka, ny tsingeringerin’ankizy mahafanina. Raha rovitra lamba fitafy, mahatsiaro ny lafi-kavan’I Neny, raha robaka tafo fialofana dia mahatsiaro ny lafi-kavan’I dada.”
“fotoan-goaika, hono, ny eny antanin-katsaka, fotoanan’ny mpiasa ny eny an-tanimboly, fotoanan’ny mpiandaka ny eny imorona fa efa fotoana nifanomezana kosa ny antsika mianakavy anio.”
“Ataovy toy ny soron’afon’ny Ntaolo ny dinika, ny maty akofoka, ny velona aroso ihany fa aza atao toy ny soron’afon’adala ny eo tsy maty ny kitay asesika ihany.”
“Hanao tahaka ny tatamo eny antsahan-drasahala isika, faly miara-manatrika, tezitra miara-miodina, tsofin-drivotra fa vao miha-mitopatopa, danihan’ny andro fa tsy malazo, ririsam-panala vao miha-maitso mavana. Fa na tsy latsa-paka amin’ny tany aza efa miori-paka amin’ny rano fonenana kosa.”
“Andeha isika rehetra tsy mba hisara-mianakavy, hifanohana raha miaka-piakarana, hifampitsinjo raha midim-pidinana, hifampitanana raha mizotra an-tany marina.”
“Raradraraka vovo-bolamena e, ny ampara-danitra andrefan’eny. Jenitra fialotralotra ery irony rahon’ela-balala. Ny taratr’andro mangiaka efa manaingo ny tendron’ny vohitra roabinifolo. Ny railovy injao misodisody, mirimorimo ireo andiam-boromanga. Manitra vonim-panja ery izany tsioka fa mamerovero ny asaramanitra kosa izany eto amintsika.”
Instant Malagasy - Faire un site gratuit sur Eklablog - CGU - Signaler un abus -